ह्याश्टैग अनुसन्धान उपकरण र व्यवस्थापन - पूर्ण सूची # हॅशट्याग
ह्यासट्याग थियो वर्षको शब्द एक समय, त्यहाँ थियो बच्चाको नाम ह्यासट्याग राखियो, र यो शब्द फ्रान्समा निषेध गरिएको थियो (मोट- डायसेस).
ह्याशट्यागहरूले ठूलो लाभहरू गर्न जारी राख्दछन् जब उचित मिडियामा उचित रूपमा प्रयोग गरिन्छ - विशेष गरी जब यसको प्रयोग ट्विटर र फेसबुकमा विस्तार भएको छ। यदि तपाईं केहि ह्यासट्याग आधारभूत चाहानुहुन्छ भने, हेर्नुहोस् ह्याशट्याग गाइड जुन हामीले प्रकाशित गरेका छौं। तपाईं हाम्रो पोष्ट पनि पढ्न सक्नुहुन्छ उत्तम ह्यासट्यागहरू फेला पार्दै प्रत्येक सामाजिक अपडेट को लागी।
ह्याशट्याग कसले आविष्कार गरे?
तपाईं समूहहरूको लागि # (पाउन्ड) प्रयोगको बारेमा कसरी महसुस गर्नुहुन्छ। त्यहाँ भए जस्तो #छाउनी [msg]?
- क्रिस मेसिना (@ chrismessina) अगस्ट 23, 2007
एक खोजशब्द अनलाइन जानकारी खोज्नको लागि आवश्यक छ, ह्यासट्याग पनि महत्त्वपूर्ण छ। हामीले यस बारे लेखेका छौं के एक hashtag छ विगतमा। व्यक्ति र व्यवसायले ह्यासट्यागहरू फेला पार्न प्रयोग गर्दछन्, तर अरूले सामाजिक खोजी प्रविधिहरू प्रयोग गर्नका लागि ह्यासट्यागहरू पनि प्रयोग गर्छन्।
ह्यासट्याग प्लेटफर्म सुविधाहरू:
ह्याशट्याग अनुसन्धान, विश्लेषण, अनुगमन, र व्यवस्थापन उपकरणहरूमा सुविधाहरूको एक सरणी छ:
ह्याशट्याग ट्रेन्डि। - ह्याशट्यागमा प्रवृत्तिको प्रबन्धन र अनुगमन गर्ने क्षमता।
ह्यासट्याग अलर्टहरू - वास्तविकतामा सूचित गर्न क्षमता, एक ह्यासट्यागको उल्लेख गर्न।
ह्याशट्याग अनुसन्धान - ह्याशट्याग र कुञ्जीको मात्रा प्रयोग प्रभावकारी कि ती उल्लेख।
ह्याशट्याग खोजी - तपाईको सामाजिक मिडिया संचारमा प्रयोगको लागि ह्यासट्याग र सम्बन्धित ह्यासट्यागहरू पहिचान गर्दै।
ह्यासट्याग पर्खाल - तपाईंको घटना वा सम्मेलनको लागि वास्तविक-समय, क्युरेट गरिएको ह्यासट्याग प्रदर्शन सेट अप गर्नुहोस्।
यी प्लेटफर्महरू केहि नि: शुल्क छन् र सीमित क्षमताहरू छन्, अन्यहरू उद्यम प्रयोगको लागि निर्माण गरिन्छ वास्तवमा तपाईंको सामाजिक मिडिया मार्केटिंग प्रयासहरू ड्राइभ गर्न। साथै, प्रत्येक उपकरणले वास्तविक सामाजिक समयमा प्रत्येक सामाजिक मिडिया प्लेटफर्मको अनुगमन गर्दैन ... ताकि तपाइँलाई के चाहिन्छ भनेर पक्का गर्नको लागि यस उपकरणमा लगानी गर्नु अघि तपाईंले केही अनुसन्धान गर्नु पर्छ!
Agorapulse - सामाजिक मिडिया उपकरणहरूको पूर्ण सूटको अलावा, एगोरापल्सेसँग पनि ह्यासट्याग निगरानी र रिपोर्टि। छ।
सबै ह्यासट्याग - सबै ह्यासट्याग एक वेबसाइट हो, जुन तपाईंको सोशल मिडिया सामग्री र मार्केटिंगको लागि द्रुत र सजिलो शीर्ष प्रासंगिक ह्यासट्याग बनाउन र विश्लेषण गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईं हजारौं सान्दर्भिक ह्यासट्यागहरू उत्पादन गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंले सजिलै प्रतिलिपि गर्नुभयो र तपाईंको सोशल मीडिया पोष्टहरूमा टाँस्नुहोस्।
Brand24 - अनलाइन उल्लेख गर्न द्रुत पहुँच प्राप्त गर्नुहोस्, ग्राहकको सन्तुष्टि र बिक्री बढाउनुहोस्।
ब्रान्डमेन्शन्स ह्याशट्याग ट्र्याकर - ह्याशट्याग प्रदर्शन मनिटर गर्न नि: शुल्क ह्याशट्याग ट्र्याकिंग उपकरणहरू।
BuzzSumo - BuzzSumo तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरू, ब्रान्ड उल्लेख र उद्योग अपडेटहरू अनुगमन गर्दछ। चेतावनीहरू निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले महत्त्वपूर्ण घटनाहरू समात्नुभयो र सामाजिक मिडिया हिमस्खलन अन्तर्गत दबिन नहुनुहोस्।
HashAtIt.com खोजी ईन्जिन हो जुन तपाईंको मनपर्ने सोशल मिडिया वेबसाइटहरू जस्तै फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, र पिन्टेरेस्टमा HASHTAGS (#) खोजी गर्दछ।
Hashtracking - क्युरेट सामग्री, बढेको समुदाय, पुरस्कार विजेता अभियानहरू सिर्जना गर्नुहोस् र नाटकीय लाइभ सोशल मिडिया प्रदर्शनहरू।
हॅशटॅगिफाई.मी ट्विटर ह्याशट्याग र उनीहरूको सम्बन्धहरू अन्वेषण गर्न एक नि: शुल्क उपकरण हो। विश्लेषण सबै ट्वीट्सको १% नमूनाको आधारमा हुन्छ - अधिकतम जुन ट्वीटरले नि: शुल्क दिन्छ।
हॅशट्याग.org व्यक्ति, व्यवसाय र संगठनले उनीहरूको सामाजिक मिडिया ब्रान्डि and र बुद्धिको सुधार गर्नका लागि आवश्यक जानकारी, अनुसन्धान र कसरी ज्ञान प्रदान गर्दछ।
किहोल - ट्र्याक ह्यासट्याग, कुञ्जी शब्द, र यूआरएल वास्तविक समय मा। किहोलको ह्यासट्याग एनालिटिक्स ड्यासबोर्ड व्यापक, सुन्दर र साझेदारी योग्य छ!
परीक्षण किहोल बाहिर:
RiteTag ट्विटर, युट्यूब, इन्स्टाग्राम, फ्लिकर… र अधिक सहित धेरै महत्त्वपूर्ण सामग्री-साझेदारी नेटवर्कहरूको अद्वितीय ट्यागिंग अवरोधहरू अँगाल्ने गरी, साझा गर्न सामग्रीको साथ जानको लागि उत्तम ट्यागहरू फेला पार्ने प्रक्रियालाई स्ट्रिमलाइन गर्दछ।
Tagdef - पत्ता लगाउनुहोस् हैशटैगको अर्थ के हो, सम्बन्धित ह्यासट्यागहरू फेला पार्नुहोस् र सेकेन्डमा तपाईंको आफ्नै परिभाषा थप्नुहोस्।
ट्र्याकमाईह्याष्ट्याग - एक सामाजिक मिडिया एनालिटिक्स उपकरण जसले ट्विटर अभियानको वरिपरि सबै गतिविधिहरू ट्र्याक गर्छ, ती गतिविधिहरूको विश्लेषण गर्दछ, र धेरै उपयोगी अन्तरदृष्टि प्रदान गर्दछ। ट्र्याकमाइहास्टागसँग विषयको हरेक मिनेट विवरण दिनको लागि पूर्ण सोशल मिडिया अभियान ट्र्याक गर्ने क्षमता छ। यसले धेरै उपयोगी जानकारी प्रदान गर्दछ जुन कुनै पनि सामाजिक मिडिया अभियानको प्रभाव विश्लेषण गर्न, प्रतियोगिताको सामाजिक मिडिया रणनीतिको सबै गतिविधि ट्र्याक गर्न, वा आफ्नै सामाजिक मिडिया मार्केटिंग रणनीति बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ। ट्र्याकमाइहास्टागले ट्वीटहरू र मेटाडेटा ट्रक गर्दछ कुनै पनि कुञ्जी शब्द, ह्यासट्याग, वा @ मेनमेसन, दुबै वास्तविक-समय र ऐतिहासिक कुनै पनि समयका लागि।
युनियन मेट्रिक्स युनियन मेट्रिक्सले तपाईंलाई सामाजिक मार्केटि intelligence इन्टेलिजेंसको साथ तपाईलाई सशक्त बनाउँदछ तपाईंको दर्शकहरूमा पुग्न र तपाईंको व्यवसाय निर्माण गर्न आवश्यक छ।
नि: शुल्क ट्विटर स्न्यापशट रिपोर्ट चलाउनुहोस्
ट्विटर खोज - अधिकांश व्यक्तिहरू एउटा ट्वीटरमा भर्खरको ट्वीटहरू फेला पार्न ट्विटर खोजीमा हेर्नुहोस्, तर तपाईं यसलाई ट्विटर खाताहरू अनुसरण गर्नका लागि पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ मान्छे र तपाईले प्रयोग गरिरहनु भएको हैशटैगका लागि शीर्ष खाताहरू पहिचान गर्नुहोस्। यसले कार्य गर्न लक्ष प्रदान गर्दछ यदि तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरू ह्यासट्यागको लागि चिनिन्छ तर तपाईं हुनुहुन्न।
टबब्स एक साइट हो जहाँ तपाईं वास्तवमै खोज्न, दर्ता गर्न र एक निश्चित ह्यासट्याग ब्रान्ड गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूसँग मध्यम ट्वीट भित्ताहरू जस्ता उपकरणहरू छन् जुन तपाईं आफ्नो अर्को घटना वा सम्मेलनको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
Trendsmap - तपाईं आफ्नो क्षेत्रको दृश्यबाट सुरू गर्नुहुन्छ जहाँ तपाईं ट्रेन्डि topics शीर्षकहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईं नक्शालाई अन्य क्षेत्रमा तान्दै स्क्रोल गर्न सक्नुहुनेछ वा थप / माइनस आईकनहरू प्रयोग गरेर जुम इन वा आउट गर्नुहोस्। जब तपाईले त्यस चीजलाई रमाईलो देखिनुहुन्छ भनेर देख्नुहुन्छ त्यस्तै अधिक जानकारीको लागि जस्तै स्थानीय रूपमा बनाम ट्वीट्सको भोल्यूमका ग्राफहरू जुन विषय सम्भावित रूपमा हुन्छ, छविहरू, लि links्कहरू, र हालसालैका ट्वीट्समा। तपाईले यो पनि देख्न सक्नुहुनेछ कि यस विषयलाई विस्तृत डिस्प्ले भित्र रहेको विषयलाई क्लिक गरेर वा यस स्थानमा यस स्थानका नाममा क्लिक गरेर अरू के के कुरा गरीरहेछन् भन्ने कुरा लोकप्रिय छ।
जियोचिरप - GeoChirp ले तपाईंलाई एक विशेष क्षेत्रमा विशेष चीजहरूको लागि ट्विटरिंग गर्ने व्यक्तिको खोजी गर्न मद्दत गर्दछ।
प्रकटीकरण: म यस लेख भर मा सम्बद्ध लिंक प्रयोग गर्दैछु।
टैग: ब्रान्ड 24क्रिस मेसिनाएक्सेल रिपोर्टहरूफेसबुक हैशटैगह्याशट्याग खोज्नुहोस्पहिलो ह्याशट्यागजियोचिरपगुगल अनुसन्धानगुगल + हैशटैगhashatitह्यासट्याग अनुप्रयोगहरूhashtag रखरखावह्याशट्याग निगरानीह्याशट्याग अनुसन्धानह्यासट्याग खोजी ईन्जिनह्याशट्याग उपकरणहरूhashtagify.mehashtagsPinterest हैशटैगरीटेट्यागरोउफिडरहेरौंकेवल मापनसमाजवादट्यागबोर्डट्यागडेफट्रेंडम्यापट्वीटरीचtwitterट्विटर हैशटैगट्विटर अनुसन्धानट्विटर खोजीटबस
जनवरी 30, 2013 मा 5: 56 एएम
उदाहरणका लागि फेसबुकलाई नै लिऔं। यसको कमेन्ट बक्स ग्राहक सेवा टोलको रूपमा प्रयोग गर्नको लागि एक आदर्श सुविधा हो। यसको विपरित, ट्विटर ह्यासट्यागहरूले छलफलहरूको लागि एक अद्वितीय ट्यागिङ प्रणाली प्रदान गर्दछ।
जुन 13, 2013 मा 12: 32 PM
ट्यागबोर्ड समावेश गर्नुभएकोमा धन्यवाद - स्तब्ध छ, मैले भर्खरै यो पोस्ट भेटें! हामी अझै बलियो हुँदै गइरहेका छौं र यसलाई मध्यस्थता, लाइभ मोड, इत्यादि सहित पोस्ट गरेदेखि दर्जनौं सुविधाहरू लागू गरेका छौं... हिजोको फेसबुक घोषणा हाम्रो लागि अचम्मको थियो! यद्यपि हामीले अक्टोबरदेखि उनीहरूको प्लेटफर्मबाट #ह्यासट्यागहरू तान्दै आएका छौं, यो घोषणाले FB मा #hashtags को प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्‍यो र हामीले विगत १२ घण्टामा #hashtag को प्रयोग गरेर अविश्वसनीय अपटेक र धेरै सामग्री देखिरहेका छौं।
जुन 22, 2013 बिहान 2:43 बजे
महान सूची! यो पोष्ट गर्नु भएकोमा धन्यवाद
अक्टोबर 24, 2013 बिहान 3:01 बजे
RiteTag, Douglas, र यदि हामीले G+ भिडियो कल गर्न सक्छौं भने, म तपाईंद्वारा हाम्रा योजनाहरू चलाउन चाहन्छु। हामी ह्यासट्याग परिणाम-मापन सुइट बन्न जान चाहन्छौं।
सर्वश्रेष्ठ ओर्लान्डो एसईओ कम्पनी
यो एक शानदार समाचार हो "ट्विटरमा ह्यासट्याग प्रयोग हुने फ्रिक्वेन्सी ट्र्याक गर्दछ र ह्यासट्यागको बारेमा विवरणहरू प्रदान गर्दछ।" महान पोस्ट…
सीईओ / संस्थापक / सामाजिक नेटवर्क शो होस्ट
अक्टोबर 18, 2014 बिहान 8:55 बजे
आकर्षक र सहयोगी, धन्यवाद।
डिसे 17, 2015 मा 9: 21 AM
मलाई तपाईंको ब्लग साँच्चै मनपर्छ - यो मैले धार्मिक रूपमा पछ्याउने थोरै मध्ये एक हो तर त्यहाँ एउटा कुरा हो जुन मैले बुझिन, किनभने कसैले यसलाई कहिल्यै उल्लेख गर्दैन - तपाईं होइन, बफर होइन।
1. यसले तपाईंलाई सूचीबद्ध गर्दछ (जस्तै IFTTT मा गम्भीर रूपमा ढिलो स्वचालनको कारण र यो "मलाई ध्यान दिनुहोस्" प्रवृत्ति) -
2. यसले तपाईंलाई थप संलग्नता दिन्छ तर केवल बटहरू र स्वचालित रिट्वीटको कारणले।
यस सिद्धान्तको परीक्षण गर्न, मैले एउटा बोट बनाएको छु जसले जेफ बुल्लासलाई २ महिनासम्म रिट्विट गर्नुबाहेक केही गरेन (किनभने जेफका लेखकहरूले मैले चिनेको भन्दा धेरै ह्यासट्यागहरू प्रयोग गर्छन्) र मेरो बोट १००० पटक सूचीबद्ध गरिएको छ र यसमा म भन्दा उच्च सामाजिक अधिकार छ। Followerwonk अनुसार! कसैलाई फलो गर्दैन RT Jeff Bullas र #growthhacking बाहेक केहि गर्दैन। #socialmedia वा #emailmarketing को साथ एक सूची निर्माण गर्न परेशान नगर्नुहोस् - तपाईं फोहोर पाउनुहुनेछ
म #SSA को कारण सूचीबद्ध हुन वा थप बोट संलग्नता प्राप्त गर्न चाहन्न। त्यसैले IMHO, ह्यासट्यागहरूले कुनै वास्तविक मूल्य थप्दैनन् (ट्विटर च्याटहरू र सम्मेलनहरू आदि बाहेक)। मैले यस बारे माध्यममा एक पोस्ट लेखेको छु।
Ritetag राम्रो छ तर होइन किनभने यसले तपाईंलाई राम्रो ह्यासट्यागहरू दिन्छ (वास्तवमा, तिनीहरूको ह्यासट्यागहरूले तपाईंलाई सूचीबद्ध गर्दैन)। Ritetag उत्कृष्ट छ किनभने तपाइँलाई तपाइँको ट्वीटहरूमा सहजै तस्विरहरू, मेम्स र gifs थप्न दिन्छ।
17 डिसेम्बर, 2015 बेलुका 2:14 बजे
डेबी - त्यो हाम्रा पाठकहरूको लागि उत्कृष्ट सल्लाह हो। र तपाईं सहि हुनुहुन्छ - हामीले Ritetag प्रयोग गर्दा, चित्रहरू थप्ने क्षमता शानदार छ। म एनिमेटेड gifs को लागी अलि लत छु!
17 डिसेम्बर, 2015 बेलुका 3:34 बजे
हामीसँग एक भन्दा बढी चीजहरू साझा छन्! म पनि gifs को लत छु। 🙂
मार्क्स 11, 2016 मा 4: 15 PM
यस खान क्षेत्रलाई कसरी नेभिगेट गर्ने राम्रो सल्लाहहरू।
सेप्टेम्बर 6, 2016 मा 9: 48 AM
खोज सुझावहरू बिना कुनै कुञ्जी शव्द अनुसन्धान पूरा हुँदैन, विशेष गरी जब यो मोबाइल खोजको लागि आउँदछ, जहाँ मानिसहरू प्रायः समय बचत गर्न प्रयोग गर्छन्। मसँग नम्बरहरू छैनन् तर मलाई याद छ कि मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूले खोज सुझावहरूमा धेरै पटक क्लिक गर्छन् र ती सुझावहरू तपाईंको नियमित प्रश्नहरू भन्दा धेरै फरक छन्। उदाहरण: https://serpstat.com/keywords/questions/?query=bluetooth+speaker&se=g_us
सेप्टेम्बर 15, 2016 मा 2: 08 AM
धेरै रोचक लेख! मैले एसईओ र सोशल मिडिया मार्केटिङको क्षेत्रमा भएकाहरूलाई यो धेरै उपयोगी पाएँ।
यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरको थप लेखको पर्खाइमा छु!
जनवरी 27, 2021 मा 3: 28 एएम
राम्रो काम! मैले उल्लेख गरिएका सबै उपकरणहरू पढेको छु। यसलाई जारी राख्नुहोस्!
यो उपयोगी जानकारी साझा गर्नुभएकोमा धन्यवाद। तपाईंले ह्यासट्याग एनालिटिक्स उपकरणहरूको बारेमा कुरा गरिरहनुभएको छ, त्यहाँ एउटा थप नि: शुल्क उपकरण छ जुन म तपाईंलाई परिचय गराउन चाहन्छु।
यसको नाम https://www.trackmyhashtag.com/ - एक ह्यासट्याग विश्लेषण उपकरण। ट्विटरबाट वास्तविक समयमा कुनै पनि प्रकारको ह्यासट्याग डाटा ल्याउन र उपयोगी तथ्याङ्कहरू उत्पादन गर्न विश्लेषण गर्नु उत्तम हो।
यदि तपाईंले यो उपकरणमा हेर्नुभयो र आफ्नो बहुमूल्य प्रतिक्रिया दिनुभयो भने म आभारी हुनेछु।
जनवरी 31, 2021 1:19 बजे
मैले उपकरण थपेको छु र यो लेख अपडेट गरेको छु, धन्यवाद!
Trackmyhashtag समावेश गर्नुभएकोमा धन्यवाद। म देखेर साँच्चै खुसी छु 🙂